इन्टरनेट मन्त्रालयहरू - ख्रीष्टको चर्च
संयुक्त राज्य अमेरिका मा क्रिश्चियन चर्च
संसारभरको क्रिश्चियन चर्च
ख्रीष्टियनहरूको चर्चित अनलाइन
नयाँ चर्च प्रोफाइल दर्ता गर्नुहोस्
अवस्थित चर्च प्रोफाइल अद्यावधिक गर्नुहोस्
ख्रीष्टको लागि Gators
विश्वविद्यालय मिशिगन - ख्रीष्टमा विद्यार्थीहरू
क्रस क्याम्पस मन्त्रालयहरू - सूर्यको चर्च हो
टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय - ईन्जिनियरिङ् क्रिश्चियन
सत्यमा फोकस गर्नुहोस्
प्रभुको बाटोको खोजीमा
अन्तर्राष्ट्रिय सुसमाचार घण्टा
बाइबलले के भन्छ?
सुसमाचार प्रसारण नेटवर्क
नयाँ नियम ईसाई धर्मको लागि एक कल
Agape बाइबल अध्ययन अनलाइन
JM बाइबलले मदत गर्दछ
संसारको लागि सत्य
विश्व बाइबल स्कूल
पुस्तक र भिडियोहरू
21st सदी क्रिश्चियन
लम्बर्ट बुक हाउस
मार्स हिल बुक स्टोर
शललाonda संगीत इंक
ई बाइबल बाइबल शिक्षक
अनावरण गरिएको सुसमाचार
आपातकालीन प्रसारण नेटवर्क
आपातकालीन आपदा राहत संगठन
क्रिश्चियन क्रिश्चियन आपदा प्रतिक्रिया दल
क्राइस्ट क्राइस्ट क्राइस्ट एक्स्पोर्ट इंक
आपदा सहयोग मिशन
सिलबोनो गार्सिया, II।
अन्य ईसाईलस्टिस्टहरू द्वारा उपदेश
हामी चर्चहरूको लागि डिजाइन वेबसाइटहरू
वेबसाइट डिजाइन र होस्टिंग
मोबाइल अनुप्रयोग डिजाइन
"मैले मेरो लागि योजनाहरू पाएको छु," प्रभु भन्नुहुन्छ।
यर्मिया 29: 11 थप पढ्नुहोस्
कटनी साँच्चै राम्रो छ प्रभुको लागि प्रोत्साहन गरिरहनु भएको छ तपाईलाई उहाँको सेवामा।
हाम्रा उपदेशहरूलाई सुन्नुहोस्
बाइबल अध्ययन गर्नुहोस् हाम्रो बाइबल पत्राचार पाठ्यक्रमको माध्यमबाट
म बचाउन के गर्नुपर्छ?
यो ख्रीष्टका चर्चहरू
ख्रीष्टका मण्डलीहरू को हुन् र तिनीहरूले के मा विश्वास गर्छन्?
हामी अविश्वसनीय छौं र कुनै मध्य मुख्यालय वा अध्यक्ष छैन। चर्चको प्रमुख येशू ख्रीष्ट भन्दा पनि होइन (एफिसी 1: 22-23)।
ख्रीष्टका चर्चहरूको प्रत्येक मण्डली स्वायत्त हो, र यो परमेश्वरको वचन हो जुन हामीलाई एक विश्वासमा एकताबद्ध गर्दछ (एफिसीन एनएनएनएक्सएक्स: 4-3)। हामी येशू ख्रीष्ट र उहाँको पवित्र प्रेरितहरूको शिक्षा पालन गर्छौं, र मानिसहरूको शिक्षाहरू होइनौं। हामी केवल ईसाई हुन्!
तपाईं देख नयाँको लागि चर्च परिवार सिक्नु र उपासना गर्ने? हामी माया गर्थ्यौं अधिक जान्नुहोस् तपाईंको र तपाईंको परिवारको बारे। ख्रीष्टका चर्चहरूले तपाईलाई स्वागत गर्दछ।
आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
लागि हेर्दै हाम्रो नवीनतम उपदेश? सुन्नुहोस् वा डाउनलोड गर्नुहोस् आज एक प्रतिलिपि। हाम्रो पहुँच गर्नुहोस् उपदेश विश्वव्यापी प्रचारकहरूको बारेमा सुन्नुहोस्।
हामीलाई सामेल यो आइतबार पूजाको लागि! हामी संग छ हजारौं मण्डलीहरू विश्वभर तपाईंको सुविधाको लागि। हाम्रो नजिकको मण्डली खोज्न हाम्रो अनलाइन डाइरेक्टरीहरूमा जानुहोस्।
तपाईंको चर्च निर्देशिका प्रोफाइल लगइन गर्नुहोस्
सिक्न हाम्रो चर्चको बारेमा
हामी बोल्छौं जहाँ बाइबल बोल्छ, र हामी चुस्त छौं जहाँ बाइबल मौन छ। हामी अविश्वसनीय छौं र कुनै मध्य मुख्यालय वा अध्यक्ष छैन.
थप पढ्नुहोस् ख्रीष्टको मण्डलीहरू
चर्चको प्रमुख येशू ख्रीष्ट आफैले भन्दा पनि होइन (एफिसी 1: 22-23)।
तपाईं के आशा गर्न सक्नुहुन्छ
प्रार्थना गर्ने बेलामा: पूजाहारी सेवाको दौडान थुप्रै पुरुषहरूले मण्डलीको प्रार्थनामा सार्वजनिक प्रार्थना गर्नेछन्।
We परमेश्वरको उपासना गर्नुहोस् आत्मामा र सत्यमा
गायन: हामी धेरै गीतहरू र गीतहरू सँगसँगै गाउनेछौं, एक वा बढी गाउने नेताहरू। यो एक क्याप्ले गाईन्छ (संगीत वाद्ययंत्रको संगम बिना)।
प्रभुको भोज: हामी हरेक आइतबार प्रभुको भोजको भाग लिन्छौं जुन पहिलो शताब्दीको चर्चको ढाँचामा।
सौर मिशन फिलिपिन्स
7,000 द्वीपहरु र 104 मिलियन को बढती आबादी संग फिलीपींस एक प्रमुख देश हो र एशिया को सामरिक गेटवे हो।
कसरी पत्ता लगाउनुहोस् संलग्न हुनुहोस्
धेरै फिलीपिइन चीन, अन्य एशियाई राष्ट्रहरू र यहाँसम्मका पूर्वी पूर्वी देशहरूमा काम गर्छन्, जहाँ तिनीहरूको प्रभावशाली पदहरू छन्। सौर प्लेयरको लागि मुख्य भूमिका र समय।
प्रभुको चर्च धेरै वर्ष र हालको मिशन प्रयासको कारण धेरै वर्षसम्म फिलीपींसमा रहेको छ। आज त्यहाँ अनुमानित 800 मण्डलीहरू छन्.
हामी भावुक छौं
ख्रीष्टका चर्चहरूले तपाईंलाई हाम्रो साथ भगवानको उपासना गर्न स्वागत गर्दछ। हामी यहाँ परमेश्वरको सेवा गर्न र प्रभुको साथ आफ्नो पैदल यात्रामा सहयोग गर्न यहाँ छौं। तपाईंको समुदायमा ख्रीष्टको मण्डलीको भ्रमण गर्नुहोस्। यो भगवानको परिवारको सेवा गर्दै सधैं खुशी छ। यदि हामी तपाईंलाई कुनै पनि सेवा हुन सक्छन भने कल गर्न वा लेख्न नहिच्नुहोस्।
हाम्रो बारेमा थप सिक्नुहोस्
उपदेशहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो ब्लग पढ्नुहोस्
"ख्रीष्टको मण्डली मेरो परिवारमा के हो र मलाई खोज्न र आवश्यक थियो। हामीसँग ईसाईको सुसमाचार साझा गर्न इन्टरनेट सेन्टिभमेन्टहरूको लागि धन्यबाद छौं। भगवान राम्रो छ! "
हाम्रो अनलाइन सेवा
सिलबोनो गार्सिया, II। ईशान्जेलिस्ट
सिलबोनो गार्सिया, II। ख्रीष्टका चर्चहरूका लागि सुसमाचारको रूपमा सेवा गर्दछ, र इन्टरनेट मन्त्रालयहरूको संस्थापक छ। भाइ गार्सियाले क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, आइडिया, आइवा, न्यू यर्क र टेक्सासमा मिसनरी कार्य गरे। उहाँले संसारभरि सुसमाचार सभाहरूमा प्रचार गर्नुभएको छ। मई 1 मा, 1995 मा उनी सम्पूर्ण विश्व गेटवे को दुनिया भर मा क्रिश्चियन क्रिस्टिन्स को लागि दुनिया भर मा www.church-of-Christ.org मा नियुक्त गर्न को लागी सहायक थिए। यो अनलाइन सेवाले संसारभरिका ख्रीष्टका चर्चहरूका लागि इन्टरनेटमा एक हबको रूपमा सेवा पुर्याउँछ।
भाइ गार्सिया इन्टरनेशनल इंजीलवादको क्षेत्रमा ईन्टरनेट इभान्जिस्टिस्ट र अग्रगामीको रुपमा चिनिन्छ। येशूका सुसमाचारको सुसमाचार फैलाउन इन्टरनेट प्रयोग गरेर सैकड़ों मण्डलीहरूलाई सहयोग पुर्याउनुहुने उहाँ सहायक हुनुहुन्छ। उनको अनलाइन प्रयास सबै प्रमुख डेनोमेशनल समूहले सेकेन्डर संसार सहितको अनुभव गरेको छ।
इन्टर्नेट मन्त्रालयका बारे थप जान्नुहोस्
प्राप्त सम्पर्कमा रहनु
डेभेनपोर्ट, आईए 52809
भगवान अद्भुत छ
जडान गर्नुहोस् हामी संग
हामीलाई थाहा छ
मद्दत: कसरी वर्तमान चर्च प्रोफाइल अद्यावधिक गर्ने
मद्दत: कसरी नयाँ चर्च प्रोफाइल सिर्जना गर्ने
प्रतिलिपि अधिकार © 1995 - 2020 इन्टरनेट मन्त्रालय। मसीहका चर्चहरूको एक सेवकाई। सर्वाधिकार सुरक्षित।
आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम भूल?
प्रयोगकर्ता नाम *
इ - मेल ठेगाना *
ईमेल ठेगाना निश्चित गर्नुहोस्
पासवर्ड सुनिश्चित गर्नुहोस *
सुरक्षा कोड; *
एक फुली (*) चिनो लगाइएको क्षेत्रहरू आवश्यक छन्।